musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » Flight Center Inodyara 25% Stake mu3Mundi
Airlines • Argentina Breaking Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Denmark Kuputsa Nhau • Finland Kuputsa Nhau • France Kuputsa Nhau • Germany Kuputsa Nhau • nhau • Norway Kuputsa Nhau • Sweden Kupwanya Nhau • Switzerland Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Dai 16, 2017
Flight Center Travel Group (FCTG), imwe yemakambani makuru epasirese, yakawedzera kusimbisa mafambiro ayo emakambani muEurope.
Kambani ine dzimbahwe reAustralia, iyo ichangowana mabhizinesi emakambani kuDenmark, Finland, Germany, Norway neSweden, nhasi yazivisa chibvumirano chekudyara mu25% mugove webhizimusi rekufamba nebhizinesi agency, 3mundi, iyo inoshanda muFrance, Switzerland ne Speini. Iyo mari inotarisirwa kuzadzikiswa zviri pamutemo muna Chikunguru 2017.
Muna 2015, 3mundi akazova muridzi wemalayisensi muFrance neSwitzerland yeFCTG's flagship yepasirose mafambiro emakambani, FCM Travel Solutions, uye yakatengesa pasi peiyo FCM brand kubvira 2016.
3mundi yakavambwa mu2006 naJordy Staelen naSimon Renaud senhengo inofambira mberi ichibatanidza tekinoroji yepamusoro-soro uye tarenda revanhu kusimudzira masevhisi ekufambisa. 3mundi yakura nekukasira ichiwana kukura kwegore pagore re37.8 muzana pakati pa2012 na2016. Iyo kambani inoshandisa vashandi ve115 kumahofisi ayo muParis, Geneva neBarcelona uye parizvino inove seimwe yemakambani ari kukura nekukurumidza muEurope muFT 1000.
Kubva zvavakava mubatsiri weFCM muFrance, 3mundi yakahwina vatengi vatsva vanokosha kusanganisira PriceWaterhouseCoopers, international engineering nyanzvi Fives Group uye ichangoburwa CNRS (French National Center for Scientific Research). Iyo yekupedzisira ine yegore bhizimusi yekufambisa yekushandisa inoshandisa ye € 35M.
Pamusoro pezvemabhizinesi emakambani ekufambisa muFrance neSwitzerland, 3mundi inoshandisa bhizinesi rekufambisa bhizinesi muBarcelona, ​​iri kubudirira kugadzira tekinoroji yekushandisa uye maturusi eindasitiri yekufamba.
"FCM ne3mundi vakafarikanya kudyidzana kwakanakisa kubvira 2015 uye tinofara kuve nekuumba chisungo chakatosimba neumwe wedu muFrance neSwitzerland tichishandisa mari iyi," akadaro Steve Norris, director director wekambani - EMEA, Flight Center Travel Group . "France neSwitzerland zvakakosha nzvimbo dzekushandira makambani kune vatengi vedu varipo uye nemaakaundi matsva emarudzi akawanda atiri kutarisa pasi rose. Kuisa mari uku kuchasimbisa nzvimbo yeFCM mumisika iyi, uye kunotsigira zano redu rekuwedzera huvepo hwedu muEurope, uhwo hunosanganisira UK, Ireland, Netherlands, Sweden, Finland, Norway neDenmark. ”
Jordy Staelen, director director, 3Mundi anoti: "Tiri kutarisira kubatana zvakanyanya neFCM neFlight Center Travel Group. Uku kudyara inhau dzakanaka kwazvo kune vatengi vedu nevashandi. "Zvinotipa mukana wekuwedzera uye kubatsirwa nesimba repasi rose reC FCM, zvigadzirwa, masevhisi uye hunyanzvi."
Investment yeFCTG mu3mundi ndeyekupedzisira muhuwandu hwetekinoroji uye e-commerce zvigadziriso zvakaziviswa nguva pfupi yadarika. Mwedzi wapera, FLT yakazivisa kuti yawana 24.1% kufarira muBibam, boka reArgentina-rekufamba uye tekinoroji ine huvepo hwakasimba munzvimbo dzekutandarira uye dzekunze, makambani pamwe neakawanda. Bibam (Bibelos América), boka rechipiri pakufamba reArgentina, rine uye rinoshandisa iyo brand yeBiblos uye inokurumidza kukura e-commerce player Avantrip.com. Chibvumirano ichi chinopa FLT inovandudzwa yedhijitari ekutengesa kugona kuburikidza nekuwana kune Bibam's scalable e-commerce mapuratifomu uye matimu ekuvandudza masoftware.